दोहोरिरहने राजनीतिक प्रकोप- विचार - कान्तिपुर समाचार
दोहोरिरहने राजनीतिक प्रकोप
सानो होस् वा ठूलो, खराब चीजलाई विस्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति फेरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने वैचारिकी स्थापित गर्नु कदापि होइन । विषयलाई जतातिरबाट तन्काए पनि समस्या दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै छ ।
जेष्ठ १, २०७८ आहुति
चरम विरोधमा उत्रिएको देखिने प्रचण्डहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासम्म लिने ल्याकत मरिकाटे नदेखाइरहेको उदेकलाग्दो माहोलमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । विश्वासको मत प्राप्त भए पनि नभए पनि आफ्नो योजनालाई फाइदा पुग्ने प्रस्ट परिवेश नदेखी त्यस अवस्थामा कसैले पनि आफैं विश्वासको मत माग्दैन भन्ने सहजै बुझिने कुरा हो ।
माधव–झलनाथहरूले कतिसम्म गर्ने हैसियत राख्छन् भन्ने बुझेको र महन्थ–राजेन्द्रहरूसँगको सेटिङ तयार भएको स्थितिमा विश्वासको मत प्राप्त नहुनु पनि ओलीले चाहेकै परिणाम थियो । विश्वासको मतमा ओली पराजित भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का धेरैजसो चिनिएका कार्यकर्तामा ससानो क्रान्ति नै फत्ते भएझैं उत्साह देखा पर्‍यो । त्यसै गरी न्यायको पक्षमा लेख्ने–बोल्ने बौद्धिकहरूको ठूलै झुन्डले पनि सन्तोषको गहिरो सास लिएको भान भयो । नयाँ सरकारका निम्ति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र बाबुराम–उपेन्द्रहरूको गठबन्धनको प्रयास सुरु भएपछि त्यो हर्ष झन् बढ्दै गयो । माधव–झलनाथहरूलाई कतिपयले त यतिसम्म भन्न भ्याए, ‘जेठ २ होस् वा नहोस् मतलब छैन तर ओली हटाइनुपर्छ ।’ अन्ततः माधव–झलनाथ समूहले आफ्नो असली चरित्र देखायो, महन्थ–राजेन्द्र समूहसँग बनाइएको सेटिङ सबै लज्जा भत्काएर खरो उत्रियो अनि बन्यो फेरि ओली नेतृत्वको सरकार । कहाँबाट कस्तो सेटिङ कुन उद्देश्यले भइरहेछ भन्ने विषयलाई आफ्नो परम्परागत अनुभवमा पर्गेलेको नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि ओलीका कदमहरूविरुद्ध न तीव्र विरोधमा गएको थियो, न त सरकार बन्न नसक्दा नै निराश देखियो । तर ओलीको बरखास्तगीलाई भयानक उपलब्धि देख्नेहरूबीच भने आज एक प्रकारको गहिरो विषादको मनोदशा देखा परेको छ । संसद्वादी राजनीतिमार्फत नै आफ्नो जीवन देख्नेहरूको खिन्नता त स्वाभाविक छ तर त्यो खेलमा आम श्रमजीवी जनता, देशभक्तहरू र न्यायका पक्षपाती बौद्धिकहरूमा पनि त्यस्तो मनोदशा देखा पर्नु सही हुन सक्छ ? यस विषयमा भने छलफल आवश्यक भएको छ । आज ओली जसरी संसदीय राजनीतिमा पुनः हावी भएका छन्, यस विषयलाई नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चरित्र, विश्व साम्राज्यवाद विशेषतः भारतीय शासक वर्गले नेपालमा गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन र उसले संसद्वादी राजनीतिज्ञका दिमागमा भरेको दासत्वपूर्ण वैचारिकीबाट अलग पारेर हेर्नु सही हुन सक्दैन । त्यसै गरी आजका संसद्वादी राजनीतिज्ञहरूको इतिहास र तिनका कार्यदिशामा रहेको गम्भीर वैचारिक समस्याबाट पृथक् गरेर पनि यसलाई बुझ्न सकिँदैन ।
संघीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट र वामपन्थी दुवै नहुने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका आजसम्मका गतिविधिले प्रस्ट गरेका तीनवटा कुरा छन् । एक, उनी कम्युनिस्टकै नाममा वास्तविक कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको रहलपहल बाँकी रहेका सबै चीज निमिट्यान्न पार्न चाहन्छन् । नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर भटाभट कार्यकर्ता मार्न तम्सिनु, सांस्कृतिक रूपमा कम्युनिस्टबाट कल्पनै गर्न नसकिने गतिविधि बढाउँदा आनन्दित हुनु र रहलपहल कम्युनिस्टको कुरा गर्ने प्रचण्डहरूलाई निमिट्यान्न पार्न कस्सिनु यसका ठोस प्रमाण हुन् । दुई, उनी आजको विश्व साम्राज्यवादको योजनामुताबिकको विनाशकारी ढाँचामा ‘समृद्धि’ को दलदलमा देशलाई धकेल्न प्रतिबद्ध छन् । एमसीसीप्रतिको अतिशय मोह त्यसको अकाट्य संकेत हो । तीन, संघीयता, समावेशिता लगायतका केही सुधारलाई क्रमशः सिद्ध्याउन, पहाडिया हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादी वैचारिकीलाई पुनर्जीवन दिन चाहन्छन् । समावेशिता उनको सबैभन्दा बढी चिडचिडाहटको विषय हो भन्ने त जगजाहेर नै छ । हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादी वैचारिकीप्रतिको उनको प्राथमिकता बुझ्न ठोरीको राम र पशुपतिको झल्लर काफी छ । ओली प्रवृत्तिको यस्तो समस्याको जननी भने बहुदलीय जनवाद हो । खास झुन्डको स्वार्थमय प्रचारले महान् बनाइएका मदन भण्डारीसँग बहुदलीय जनवाद जोडिएकाले बहुदलीय जनवादलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यत्तिकै भावनात्मक रूपमा मानिरहने जमात ठूलै छ, त्यसमाथि प्रचण्डहरूले निर्लज्जतापूर्वक ‘मस्का’ मारिदिँदा बहुदलीय जनवाद दिव्यज्ञान भएको भान हुने नै भयो । तर ओली प्रवृत्ति जन्मनुको वास्तविक कारण अध्ययन गर्न चाहनेले बहुदलीय जनवादभित्रको विषाक्त गुदी अध्ययन नगरी धरै छैन ।
विसं २००७ पछि लेखिएका इतिहासका पुस्तकहरूमा जंगबहादुर राणाले मच्चाएको कोतपर्वका सन्दर्भमा उनका आलोचनाहरू पाइन्छन् तर जंगबहादुर घृणा गर्नलायक पात्रका रूपमा वर्णित छैनन् । जंगबहादुरले ऐतिहासिक रूपमा घृणालायक तीनवटा काम गरेका थिए । पहिलो, जस्तोसुकै अनैतिक वा अपराधको बाटोबाट भए पनि सत्ताधारी हुने । दोस्रो, विदेशी शक्तिको गुलामी गरेर देशमा शासन टिकाउने । र तीन, जात व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै लागू गरेर हिन्दु उच्चजातीय अहंकारलाई वैधता दिने । इतिहासका पुस्तकहरूमा जंगबहादुरप्रति घृणाको भाष्य निर्माण नहुनु भनेको ती अपराधहरूलाई सामान्य ठान्नु थियो । यसको ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक निरन्तरता आजसम्म प्रस्टै देखिन्छ । अपवादबाहेक नेपालका सत्ताधारी व्यक्तिहरूले जंगबहादुरका ती तीन विशेषतालाई आफ्नो समयमा पनि एउटा महत्‍वपूर्ण आवश्यक कदमका रूपमा ग्रहण र क्रियान्वयन गर्दै आएका छन् । यस विषयमा प्राज्ञिक अध्ययनको एउटा पाटो बाँकी भए पनि ओली प्रवृत्तिले जंगबहादुरबाट सुरु भएको शासनको तरिकालाई निरन्तरता दिएको ठम्याउन खासै कठिनाइ छैन । त्यसैले त्यस प्रवृत्तिले बुझेको छ— आफ्नो दिशाहीन शासनलाई जबरजस्ती जारी राख्न विदेशी प्रभुको वफादार बन्नुपर्छ, त्यो वफादारी निर्वाह गर्दा जनतालाई उल्लु बनाउन राष्ट्रवादको कला जोड्नुपर्छ । जंगबहादुरले सुरु गरेको यो प्रवृत्ति संसद्वादी उच्च आकांक्षी हरेक नेताको एउटा मनोवैज्ञानिक रोग बन्दै आइरहेको छ ।
यस प्रकारको ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध उभिने र चिप्लिनेहरूचाहिँ कस्ता हुन् भन्ने विषयमा थोरै घोत्लिनेबित्तिकै आजको संसदीय छिनाझपटीको यथार्थ छर्लंग हुन्छ । बीपी कोइरालालाई अलग गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कहिले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको गतिलो मुखर मुद्दा नै छैन । त्यस पार्टीले कहिले पनि असमान सन्धिहरूलाई असमान ठानेन । त्यस पार्टीका नेताले प्रायः भारतीय सत्ताधारीहरूको निगाह नै अपेक्षा गरिरहे । कांग्रेसका समर्थकलाई यो तुच्छ आरोप पनि लाग्न सक्छ तर एउटै उदाहरण त इतिहासमा पढ्न पाओस् कसैले जसमा भारतीय दादागिरीका विरुद्ध यो पार्टी दृढतापूर्वक बोलेको होस् । कांग्रेसका वर्तमान प्रमुखको के कुरा गर्नु, विसं २०४८ मा गृहमन्त्री हुँदा काठमाडौंको महाबौद्धको झ्यालैमा गोली हानिएका सात वर्षीय अनिश शाक्यको मृत्यु जमलको नाचघर जलाउन खोज्दा भएको भन्ने बयान दिन्थे । ज्ञानेन्द्र शाहकहाँ बिन्तीपत्र हालेर प्रधानमन्त्री यिनै बनेका हुन्, माओवादी विद्रोहीको टाउकाको मूल्य तोक्ने पनि यिनै हुन् । आज संसदीय खेलमा मात खाएका प्रचण्डहरूचाहिँ आफ्नो इतिहास र प्रतिबद्धताबाट स्खलित भएपछि अस्तित्वरक्षाका दौडाहाहरू हुन् । उनीहरू त्यस्ता टाट पल्टेका उद्यमीजस्ता भएका छन् जसलाई उनीहरूका पुराना खानदानी रवाफका कारण लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन् । एमसीसी ल्याउन पहल गर्दा, माथिल्लो कर्णालीमा भएको राष्ट्रघातलाई माथि उक्लिने भर्‍याङ बनाउँदा अनि दस हजार सरकारी जागिरमा समावेशितालाई भताभुंग पारुन्जेल चुपचाप बस्दा पनि देशी–विदेशी राजनीतिक दादाहरूले विश्वास गरेका छैनन् । कमलराज रेग्मीहरू पञ्चायतमा प्रवेश गरेर जति काम गरे पनि संस्थापक पञ्चहरूले उनीहरूलाई खाँटी पञ्च मान्दैनथे भनेजस्तै दुःखमा प्रचण्डहरू तड्पिरहेको अवस्था हो यो । हुन त यसबीच नारायणकाजी प्रभृतिले माधव–झलनाथसहितको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सपना देखेका पनि थिए तर महाकाली सन्धिलाई ठीक भन्ने, ज्ञानेन्द्रको पाउमा पैसा राख्न हिचकिचाहट नगर्ने अनि अदालतको फैसलासँगै ओलीको पार्टीमा लम्पसार पर्न आतुर हुनेहरूबाट सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी त के, ओली प्रवृत्तिसँगको निर्णायक संघर्षसमेत सम्भव छैन भन्ने कुरा व्यवहारसिद्ध भयो । अर्का चरित्र हुन् बाबुराम भट्टराई । उनले के भूमिका खेले ? सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । ओली जसरी मध्यावधि चुनावमा असमय लगेर देशमाथि आर्थिक बोझ लाद्न चाहन्छन्, उनले पनि एक वर्षमा चुनाव गरौं भनेर त्यसैमा लोली पो मिलाए । एउटै पार्टीका सांसदहरू जता फर्के पनि हुने निर्णयमा साक्षी बसे र अन्तमा ओली चतुर भएको निष्कर्ष निकाले । ओलीको सफलतामा चतुर्‍याइँ प्रमुख कुरा हो कि वैदेशिक सूक्ष्म व्यवस्थापन ? यो समग्र प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईको न कुनै बौद्धिक हैसियत देखा पर्‍यो न त पार्टीमा निर्णायक भूमिका । उनको दिशाहीन राजनीतिक यात्राको परिणाम योभन्दा बढी सम्भवतः हुन पनि सक्दैनथ्यो । मधेसवादीका रूपमा स्थापित उपेन्द्र यादव तिनै पात्र हुन् जो ओलीले अपमानित गरेर ननिकाल्दासम्म उनकै मन्त्रिमण्डलमा लाचार छायाजस्तै देखिएका थिए । २०६३ चैत ७ गते रौतहटमा अट्ठाइस जना युवाको बीभत्स नरसंहारको एउटा तार्किक निष्कर्ष ननिस्किएसम्म लोकतान्त्रिक ऐनामा उनको चरित्र पनि ‘साफसुथरा’ देखिन सम्भव छैन । राजेन्द्र महतोहरूको राजनीति त नैतिक धरातलसहित उभिएको कहिल्यै महसुस भएकै होइन । नेपालको मधेसविरोधी सत्ताधारी राजनीतिका खिलाफमा जसोतसो आजका मधेसवादी राजनीतिज्ञले विद्रोहको नेतृत्व गरे, यस मुद्दालाई राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाउन मुख्य भूमिका खेले । यो कामको जस उनीहरूलाई जान्छ नै, तर देशभक्त चरित्र अनि पुँजीवादी संसदीय राजनीतिको सीमाभित्रै पनि सिद्धान्तनिष्ठ र नैतिक बलसहितको प्रवृत्ति भने उनीहरूले निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
यस प्रकारको समग्रतालाई केलाएर मूल्यांकन गर्ने हो भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूमा संसद्वादी फरकफरक पार्टीका नेताहरूको आधारभूत प्रवृत्ति मोटामोटी एउटै देखा पर्छ । यस्तो उनीहरूका नियतले भन्दा पनि व्यवस्था र उनीहरूले बोकेका विचार एवं दिशाको सीमाले हुन पुगेको हो । ओली छुच्चो स्वभावमा व्यक्त हुन्छन्, नकचरो स्तरमा झुट बोल्छन् र बौद्धिक गुन्डागर्दी गर्छन्, त्यसैले उनको रवाफले न्यायप्रेमीहरूमा तिक्तताको मात्रा ह्वात्तै बढाउँछ तर यो त उनको स्वभाव र शैलीको पक्ष मात्र हो । उनको सट्टामा संसदीय चालु अर्को नेता आउँदा स्वभाव र शैली फरक हुने हो, आधारभूत रूपमा देश र जनताका काम त हुने उस्तै हुन् किनकि आधारभूत वैचारिकी उनीहरू सबैको उस्तै नै छ । त्यसैले ओली हट्छन् कि हट्दैनन् भन्ने विषय आम श्रमजीवी जनता र न्यायप्रेमीका निम्ति उत्साह वा विषादको विषय होइन । सानो होस् वा ठूलो, खराब चीजलाई विस्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति फेरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने वैचारिकी स्थापित गर्नु कदापि होइन । पञ्चायत व्यवस्थाका पञ्चहरू पनि कोही उदार त कोही कठोर चरित्रका थिए । उनीहरू पनि एकआपसमा मारकाटसम्म गर्थे तर एउटा झुन्डको सट्टा अर्को पञ्चको झुन्डलाई स्थापित गरेर समस्याबाट मुक्ति त सम्भव थिएन । विषयलाई जतातिरबाट तन्काए पनि समस्या दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै छ, संसद्वादी सुरुङभित्र अलमलाइराख्ने वैचारिकीमा छ, विश्व साम्राज्यवाद मूलतः भारतीय हस्तक्षेपमै छ । तसर्थ, तन्मयका साथ आम श्रमजीवी र न्यायप्रेमीहरूले एउटा दृढ देशभक्तिपूर्ण अडान भएको, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने र दलाल पुँजीवादसँग संघर्ष गर्दै समाजवादी उत्पादनमा हामफाल्ने नयाँ राजनीतिक आन्दोलन निर्माणमा कटिबद्ध भइरहनुको विकल्प छैन ।
(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ १९:४७
कथित बलात्कारी मार्क्स
बलात्कारलाई हरेक युगमा नाजायज मानिएको छ तथापि युग र समाजैपिच्छे बलात्कारबारेको बुझाइ अलग छ । यौन सम्बन्धको नैतिकता पनि फरक युग र समाजमा बिलकुल विपरीत लाग्नेसम्मका रहँदै आएका छन् ।
वैशाख १८, २०७८ आहुति
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित स्तम्भकार सरिता तिवारीका दुई लेखमा कम्युनिस्ट दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिका सूत्रधार कार्ल मार्क्सलाई बलात्कारी व्यक्ति ठोकुवा गरिएको छ । यो ठोकुवा गोवर्धन राना प्रभृतिका लेखकले गरेका भए अर्कै विषय हुन्थ्यो । उनले त आफैंद्वारा बलात्कारी करार गरिएका मार्क्स र मार्क्सवादको अनुरागी रहेको दाबीसमेत गरेको सन्दर्भमा विषय जति रोचक बन्छ, त्यति नै गम्भीर बहस पनि जरुरी हुन्छ ।
लेखको मुद्दा अर्कै भने पनि त्यो फगत नियतको सवाल भयो । नियत होइन बरु परिणाम मुख्य हुन्छ । कथित बलात्कारी मार्क्सको दार्शनिकी त यही हो । विगत पौने दुई सय वर्षमा एउटा गज्जबको संयोग के छ भने, पुँजीवादी वृत्तमा जन्मेका विचारकहरूले पुँजीवादी विचार र राजनीतिलाई अघि बढाउन काम गरेका छन्, तर माक्र्सवादपक्षीय विचार र राजनीति गर्नेहरूमा चाहिँ मार्क्सवादको खोल ओढेर त्यसैलाई ध्वस्त पार्न काम गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । नियत, ज्ञान, चिन्तन प्रक्रिया र मध्यमवर्गीय अहम् र हठात् प्रख्यातिको हीनताग्रस्त मनोविज्ञानले ती लेखलाई कति जकडेको होला, त्यो त अहिले भन्न सकिन्न बरु भविष्यसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । कुनै लेखकका एकाध लेखकै आधारमा उसको आधारभूत वैचारिक कित्ताबन्दी जीवनभरलाई अलग ठानिदिनु पनि अन्यायपूर्ण नै हुनेछ । कार्ल मार्क्सलाई बलात्कारी ठोकुवा गर्ने लेखको खण्डनभन्दा जरुरी छ— विषयलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले बुझ्ने भन्ने चेतना निर्माणका निम्ति विमर्श । वास्तवमा ती लेखले कार्ल मार्क्ससम्बन्धी यथार्थ होइन बरु नेपाली समाजमा पुँजीवादी बीभत्सताविरुद्ध उभिन चाहनेहरूको एउटा टुकडीमा कति गम्भीर वैचारिक बालसुलभ समस्या रहेछ भन्ने यथार्थलाई छताछुल्ल पोखिदिएका छन् ।
कार्ल मार्क्स र जेनीको विवाह सन् १८४३ मा भएको थियो, १८४५ मा घरेलु कामदारका रूपमा हेलेन डेमुथ नामकी युवती पनि त्यही परिवारसँग बस्न थालिन् । कतिपयले डेमुथलाई दासका रूपमा पनि बुझ्ने गर्छन् तर उनी किसान परिवारबाट आएकी र आफ्नो स्वतन्त्र परिवार बनाउन नसक्ने हालतकी श्रमिक थिइन् । देशनिकालापछि मार्क्सको परिवार सन् १८४९ मा लन्डन पुग्यो । निर्वासित जीवनको चरम अभावबीच मार्क्सको परिवार कसरी बाँच्यो भन्ने कथा धेरैलाई थाहा छ । सन् १८५१ मा डेमुथबाट एउटा छोरो जन्मियो । त्यो बच्चाको नाम फ्रेडरिक लेविस डेमुथ राखियो अर्थात् बाबुका रूपमा फ्रेडरिक एंगेल्सको नाम दिइयो र उसलाई लन्डनकै एउटा उपकारी परिवारमा हुर्काउने व्यवस्था गरियो । त्यो बच्चा पछि इङ्ल्यान्डको एउटा मजदुर पार्टीको संस्थापक नेता पनि हुन पुग्यो । सन् १८८१ मा जेनीको मृत्यु भयो, त्यसपछि रोगले थलिएका मार्क्सको हेरचाह डेमुथले नै गरिन् । मार्क्सका तेह्र जना मलामीमध्ये डेमुथ एक थिइन् । मार्क्सको मृत्युपछि डेमुथले फ्रेडरिक एंगेल्सको घर व्यवस्थापन र राजनीतिक सहयोगीको भूमिका खेलिन् । ‘पुँजी’ भाग २ र ३ तयार पार्नमा डेमुथको सहयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १८९० मा उनको मृत्यु भयो, उनको शवलाई पनि परिवारको सदस्यसरह नै मार्क्सकै समाधि भएको हाइगेट चिहानमा समाधिस्थ गरियो । डेमुथले बच्चा जन्माएको समय आजभन्दा १७२ वर्षअघि हो र डेमुथसँग मार्क्सको सम्बन्धबारे चर्चा गरिएका पुस्तकहरू त्यस घटनाको करिब १५० वर्षपछि लेखिएका हुन् । त्यस घटनाक्रमको भोक्ता र साक्षी जेनी, माक्र्स, एंगेल्स र डेमुथ कसैले पनि केही लेखेका छैनन् । डेमुथका छोरा, जो आफैंमा नेता भए, उनले लेखेको वा बोलेको पनि साहित्य पाइन्न । त्यसैले त्यस सन्दर्भमा यसै हो भन्न धेरै नै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था अझै छ । तर पनि कतिपय परम्परावादी मार्क्सवादीहरूले जस्तो त्यो पुँजीवादीहरूले चलाएको हल्ला मात्र हो भनेर पनि पटक्कै पुग्ने अवस्था छैन किनभने डेमुथले बच्चा जन्माएको, उसलाई फ्रेडरिक एंगेल्सको नाम दिइएको र अर्कै उपकारी परिवारमा हुर्काइएको त यथार्थ नै हो । डेमुथ जीवनभर मार्क्स परिवारमै रहनु तर बच्चा भने त्यो परिवारमा नहुर्काइनु र एंगेल्सको नाम दिइनुले, मेरी ग्याब्रियल लगायतका लेखकहरूले उल्लेख गरेझैं, मार्क्स र डेमुथको सम्बन्धबाटै बच्चाको जन्म भएको हुन सक्ने तर्क तथ्यको सबैभन्दा नजिक हुन जान्छ ।
कतिपय लेखकले यस्तो विषयमा लेखिएका पुस्तक स्टालिनहरूले दमपच बनाउन लगाएजस्ता प्रसंग पनि उठाएका छन् । कम्युनिस्टहरू गल्ती छोप्नुलाई पराक्रम ठान्ने हुनाले पनि यो विषय छोपियो भनेका छन् । स्टालिनकृत सोभियत संघ र उनलाई पछ्याउने कम्युनिस्टहरूले त छोपे रे मानौं, तर दुनियाँभरिका कम्युनिस्टविरोधीलाई यो विषय उछाल्न कसले रोक्थ्यो ? रोजा लक्जेम्बर्ग, लेनिन, लुना चास्की, आन्तिनियो ग्राम्स्की, ब्रतोल्त ब्रेख्तहरूजस्ता असाधारण चिन्तकहरूलाई कसले रोक्न सक्थ्यो ? वास्तवमा त्यो घटनाको चर्चाले सर्वहारा वर्गको आन्दोलनको विशाल चुनौतीलाई तलमाथि गर्न कुनै भूमिका खेल्दैनथ्यो, त्यसैले कम्युनिस्टहरूले त्यस सन्दर्भलाई अनावश्यक उराल्न आवश्यक ठानेनन् । त्यस सन्दर्भसँग जोडिएका डेमुथसहित सबै अकल्पनीय दु:ख र दमन झेल्दै जीवनपर्यन्त सिद्धान्त र आन्दोलनको निर्माणमा लागेको तर त्यस विषयमा नबोलेको स्थितिमा बिसेक भएको घाउ कोट्याउँदै हिँड्नु आन्दोलनका निम्ति बेअर्थको विषय थियो, त्यसैले कम्युनिस्टहरूले प्राथमिकता दिएनन् । व्यक्तिगत जीवनका विषयलाई व्यक्तिगत रुचिको अधीनस्थ बनाउन थालेका पुँजीवादीहरूले पनि यस विषयलाई उराल्न रुचि देखाएनन् । पुँजीवादीहरूको जीवनमा त झन् त्यस्ता विषयका विनाशकारी प्रवृत्तिगत भ्वाङ छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो नै । डेमुथ–मार्क्स सम्बन्धको पहेलीबारे व्यापक विषय नबन्नुलाई यसरी बुझ्नु पो सही हुन्छ ।
विभिन्न अनुसन्धानकर्ता र लेखकहरूले भने यस विषयलाई पनि पुस्तकहरूमा उल्लेख गरे, जुन स्वाभाविक हो किनभने व्यक्तिहरूका सकेसम्म सबै पाटाको अभिलेख राख्नु अनुसन्धान र लेखनको आधारभूत दायित्व हो । तर महिला वा पुरुष कुनै लेखकले पनि कार्ल माक्र्सलाई बलात्कारीका रूपमा अभिलेखीकरण गरेका छैनन् ।
मार्क्स र डेमुथबीचको सम्बन्धको प्रकृति बलात्कार थियो कि अन्य प्रकृतिको भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न तीनवटा विषयमा प्रस्टता आवश्यक छ । एक, यौन सम्बन्धका विविध आयाम । दुई, माक्र्सको जीवनको आधारभूत वैचारिकी । र तीन, घटनाकृत समय र सरोकारवालाहरूको व्यवहार । बलात्कारलाई हरेक युगमा नाजायज मानिएको छ तथापि युग र समाजैपिच्छे बलात्कारबारेको बुझाइ अलग छ । त्यसै गरी यौन सम्बन्धको नैतिकता पनि फरक युग र समाजमा बिलकुल विपरीत लाग्नेसम्मका रहँदै आएका छन् । त्यसैले १७० वर्षअगाडि युरोपमा केलाई बलात्कार मान्थे आम महिला पुरुषले र कस्तो सम्बन्धलाई वैधानिक अनि अवैध भन्थे भन्ने विषयलाई ख्याल गर्नु जरुरी छ । अर्को कुरा, यौनेच्छा प्राकृतिक हो तर यौनबारेका नियम सांस्कृतिक हुन् भन्ने वैचारिकीलाई पनि बुझ्नैपर्छ । आजको समयलाई मात्र हेर्‍यो भने पनि यौन सम्बन्धका विविध आयाम छन्— वेश्यावृत्ति, विवाह, लिभिङ टुगेदर, ओपन रिलेसन, हाफ प्रेमी आदि । त्यति मात्र होइन, छोराको उपचारका लागि आमाले छोरासँग यौन सम्बन्ध बनाएका, मन परेको वा आदर गरेको पुरुष वा महिलाको केवल इच्छापूर्तिका निम्ति यौन सम्बन्ध स्वीकार गर्ने गरिएका यथार्थहरूसमेत तथ्यगत रूपमा उपस्थित छन् । सिग्मन्ड फ्रायडलाई पढ्दा त हरेक व्यक्ति भौतिक वा मानसिक रूपमा ‘व्यभिचारी’ छ । तर त्यस्ता सम्बन्ध र विषय बलात्कार होइनन् बरु मानव समाजले यौनजीवनलाई व्यवस्थित र सही परिभाषित गर्न नसकेका समस्या हुन् । बलात्कारबाट प्रजनन पनि हुन सक्छ जसरी जबरजस्ती खाना कोच्याए पनि पेट भरिन सक्छ तर मानवीय यौन सम्बन्ध र भोजन ग्रहणको सन्तुष्ट प्रक्रिया त्यो हुन सक्दैन । त्यसैले यौन सम्बन्ध विविध प्रकारको हुन पुग्नु र बलात्कार एउटै होइन । बलात्कारलाई जघन्य अपराधभित्र आज समावेश गरिनुको कारण पनि यही त हो । डेमुथ जिन्दगीभर माक्र्सकै वैचारिकी र संगठनलाई अघि बढाउन समर्पित रहिन् । के कुनै बलात्कृत महिलाले बलात्कारीलाई मर्ने बेला स्याहार गर्न र त्यसपछि पनि बलात्कारीको विचार अघि बढाउन समर्पित हुन सम्भव छ ? माक्र्सको हैसियतका कारण डेमुथसँगको सम्बन्ध बलात्कार थियो भन्ने हो भने माक्र्सको अवस्था कोट–जुत्ता बन्धकी राखेर छाक टार्नुपर्ने खालको थियो, माक्र्सको व्यक्तित्वबाट वशीभूत भएर यौन सम्बन्ध स्वीकार हुन पुगेको भए पनि त्यो बलात्कार भएन । पुरुष आठ हजार वर्षदेखि हैकममै छ, तब के सबै यौन सम्बन्ध बलात्कार मान्नु ? प्रचलित मान्यताविपरीतका यौन सम्बन्धका लागि कहिले रूप, कहिले अन्य प्रभाव त कहिले प्राकृतिक उत्तेजना कारक हुन्छन्, तर ती बलात्कार नै हुन्छन् भन्ने त होइन । लेखक पारिजात खास मान्छेसँगको यौन सम्बन्धबाट डर महसुस गर्छिन् तर बलात्कार ठान्दिनन् । मोनिका लेवेन्स्कीसमेत आफूसँगको क्लिन्टनको सम्बन्धलाई बलात्कार मान्दिनन् । त्यसैले तत्कालीन समयको वैधबाहेकका यौन सम्बन्ध सबै बलात्कार बुझ्ने कुरा कदापि सही होइन ।
कुनै पनि व्यक्तिको प्रवृत्तिलाई बुझ्न उसको वैचारिकीलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय व्यक्तिको जीवनका विभिन्न कालखण्ड फरकफरक वैचारिकीमा बाँडिएका हुन्छन् तर माक्र्सको जीवन सन् १८४५ देखि जीवनभर एउटै वैचारिकी विकासमा समर्पित रह्यो । माक्र्स त्यो केन्द्रीय व्यक्ति हुन् जसले महिला उत्पीडनको मूल कारण निजी स्वामित्व र त्यसमाथि उभिएको पितृसत्तात्मक परिवार र राज्य भएको तथ्यलाई भन्डाफोर गरे र महिलामुक्तिको आधारभूत दिशानिर्देश गरे । त्यो व्यक्तिले महिलामाथि जघन्य अपराध गर्छ भने त्यो ढोंगी हुनुपर्ने हुन्छ । ढोंगी र विचार–अन्वेषकबीच एउटै फरक हुन्छ— ढोंगीको कुनै विचार हुँदैन तर विचारक आफ्नो विचार प्रमाणित गर्न हरतरहले समर्पित भइरहन्छ । माक्र्सलाई कसैले पनि ढोंगी मान्दैनन् । जसरी आमाले निदाउँदा पनि बच्चा कुल्चिन्न, त्यसरी नै आफ्नो खोजजन्य विषयमा विचारकले छेडछाड गर्नै सक्तैन । विचारकबाट गल्ती, कमजोरी हुन सक्छन् तर आफ्नै खोजविरोधी जघन्य अपराध कसरी हुन सक्छ ? व्यक्तिको विचार अन्तर्वस्तु हो, रूप व्यवहार हो । माक्र्सको जीवनभरको विचार एउटै लयमा छ, अनि व्यवहारचाहिँ ठीक विपरीत कसरी हुन सम्भव छ ? बलात्कार वैचारिक प्रवृत्ति हो । के माक्र्सको युगान्तकारी महिलामुक्तिसम्बन्धी वैचारिकीमा बलात्कारको कुनै स्थान छ ? छैन भने माक्र्स बलात्कारी, त्यो पनि गर्भवती बनाउने स्तरसम्म, परिवार र साथीहरू सबैलाई जबरजस्ती स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने गरी तानाशाही चलाउने हदसम्म जान सम्भव छ ? अनि दुर्दान्त दिन खपेका र मानवमुक्तिका निम्ति समर्पित जेनी र एंगेल्सहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता हुन सक्छ ? यस दृष्टिबाट नहेर्ने हो भने त जसले जस्तो अपराध पनि सजिलै गर्न सक्छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी त मानव समाज नै सम्भव छैन । यो गम्भीर महत्त्वको सैद्धान्तिक विषय हो जसको आत्मसातीकरण जरुरी छ ।
कुनै पनि सामाजिक घटनाको समाधान त्यही समयका सरोकारवालाहरूले समयसापेक्षतामा कसरी खोजे भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । माक्र्स र डेमुथबाट जन्मिएको बच्चालाई त्यति बेला त्यसरी व्यवस्थापन गर्नु नै सर्वोत्तम कदम उनीहरूले ठानेको देखिन्छ । जब राजनीतिक संगठनात्मक अभियान सुरु हुन्छ, यस्ता अकल्पनीय समस्याहरू आउँछन् । त्यति बेला दुस्मन वर्गलाई फाइदा उठाउन नदिने गरी व्यक्तिगत कमजोरीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि आज त भीषण हमला छ भने, पुँजीवाद नै गलत भन्ने यात्राको सुरुआतमा दुस्मन वर्गबाट कति हमला थियो, अनुमान सम्भव छ । त्यस्तो बेला मानवजातिको मुक्तिको अभियानलाई अघि बढाउन डेमुथदेखि एंगेल्ससम्मले सांस्कृतिक बलिदान गरेका हुन सक्छन् । माक्र्स र डेमुथले गल्ती नदोहोर्‍याउने आत्मालोचनामाथि जेनीले माफी दिएकी हुन सक्छिन् । माक्र्सलाई यौन–अराजक वा महिलापीडक कसैले भनेनन् तर एक गल्ती पनि गल्ती नै हो । माक्र्सको भीमकाय सकारात्मक व्यक्तित्वमा यो सन्दर्भ एउटा दागजसरी उपस्थित छ भनेर मान्न सकिन्छ । त्यसैले माक्र्स होऊन् या बुद्ध, सबैलाई कमजोरीसहित बुझ्नु नै सही हुन्छ । तर कार्ल माक्र्सलाई बलात्कारी ठहर गर्ने हो भने जेनी र एंगेल्सलाई समेत बलात्कारी–संरक्षक करार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पाल लाफार्गदेखि लेनिन, रोजा लक्जेम्बर्गदेखि एवलिन रिडसम्मलाई मार्क्स–डेमुथ सम्बन्धभित्रको मार्क्सको जघन्य अपराधलाई छोपछाप पार्ने खलपात्रहरू मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बाँकी के रहन्छ ? माक्र्सवाद भनेको ढोंगी, नैतिक मूल्य स्खलित भएका अपराधीहरूको पोथा हो भन्ने निष्कर्ष । त्यस्तो निष्कर्षमा त माक्र्सवादका चरम विरोधी पनि पुग्न चाहन्नन् ।
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७८ २०:३०